Jaamacaddii Ugu Horraysay Dunida Oo Macallin La’aan Ardaydu Wax Ku Baranayaan Oo La Furay, Dalka Laga Furay Iyo Aqoonta Ay Bixin Doonto | FooreNews
Home Barnaamijo Jaamacaddii Ugu Horraysay Dunida Oo Macallin La’aan Ardaydu Wax Ku Baranayaan Oo La Furay, Dalka Laga Furay Iyo Aqoonta Ay Bixin Doonto
Jaamacaddii Ugu Horraysay Dunida Oo Macallin La’aan Ardaydu Wax Ku Baranayaan Oo La Furay, Dalka Laga Furay Iyo Aqoonta Ay Bixin Doonto
FoorenewsOct 27, 2016Barnaamijo, wararka0
Washington (Foore)- Dalka Mareykanka waxaa laga furay Jaamacad lagu magacaabo 42 MAACA, Jaamacadan ayaa laga keenay macnaha nolosha, oo ka timid filimka taxanaha ee qayaaliga ee ( Hitchhiker’s Guide to the Galaxy ).
Jaamacada Maraykanka oo qayb ka ah jaamacad ku taala Faransiiska, oo ay isku magac yihiin waxay ku tababari doontaa ilaa kun arday sanadkii sida loo sameeyo borogaraamyada kombuterka, iyadoo u ogolaanaysa inay iska caawiyaan borogaraamyada, kadibna ay isku saxaan.
Tani ayaa u eg qof indhaha la’ oo hagaya indhoole kale, wayna adag tahay in la qiyaaso waaalidka imanaya maalinta ugu horaysa inay jeclaadaan jaamacad aan lahayn macallin.
Laakiin tan iyo markii jaamacada 42 ay ka bilaabmatay Paris sanadkii 2013, codsiyada loo soo dirsado ayaa aad u kordhay.
Dadkii dhawaan ka baxay jaamacada waxay hadda u shaqeeyaan shirkadaha ay ka midka yihiin IBM, Amazon, Tesla, iyo kuwo bilaabay shirkado ay iyagu iska leeyihiin.
Jaamacada 42 ayaa waxaa aasaasay ninka Faransiiska ee maalqabeenka ee leh shirkadda teknoolajiyada ee Xavier Niel, oo taageeradiisa ay micnaheedu tahay in lagu dhigan karo jaamacada lacag la’aan, gurigana uu yahay lacag la’aan.
Mr Niel iyo ninka la aasaasay ayaa leh xirfado teknoolajida iyo aasaasidda shirkadaha, waxayna ku samaynayaan waxbarashada waxa uu Facebook ku sameeyay isgaarsiinta iyo Airbnb waxa ay ku samaysay qaabka loo ijaarto guryaha.
Waxay isku dayayaan inay sameeyaan inay isku daraan “in wax la isla barto” iyo in la sameeyo barnaamij wax lagu baranayo. Labadooda ayaa ah hab ay jecel yihiin cilmi baarayaasha waxbarashada, laakiin habkan macallinka ayaa dusha kala soconaya.
Ardayda jaamacada 42 ayaa la siinayaa inay kala doortaan barnaamijka ay rabaan inay sameeyaan, oo la mid ah mid ay samayn lahaayeen haddii ay joogi lahaayeen goobta shaqada, sida inay sameeyaan website ama barnaamijyada kombuterka.
Waxay dhameeyaan barnaamijka iyagoo isticmaalaya xog si lacag la’aan ah internetka looga heli karo iyo caawinaad ay ka helayaan ardayda kale.
Waxay shaqada ku qabtaan qol aad u wayn oo ay yaalaan kombutaro badan, arday kale ayaa markaas loo xulayaa inuu saxo shaqadooda.
Borogoraamyada kombuterada lagu ciyaaro, ardayda ayaa la waydiinayaa inay sameeyaan barnaamij oo ay ku tartamaan barnaamijyada. Waxay dhamaynayaan jaamacada markay gaaraan heerka 21-aad, oo qaadata saddex ilaa shan sano. Markii ay dhameeyaan waxay qaadanayaan shahaado laakiin ma qaadanayaan degree.
Dadka aasaasay ayaa sheegaya in habkan waxbarashada ay buuxinayso waxyaabaha ka dhiman habka waxbarashada caadiga ah, oo ay sheegeen inay ka dhigto ardayda inay noqdaan kuwo cilmiga macallinka oo kaliya ka qaadanaya.
“Jawaaabta aan ka helnay shirkadaha in ardaydeenna ay yihiin kuwa mar walba raadsha xogta ay u baahan yihiin, inta ay waydiin lahaayeen madaxdooda waxa ay samayn lahaayeen,” ayay sheegtay Brittany Bir oo ah madaxa howlgalka jaamacada 42 ee California oo ka soo baxday jaamacada qaybteeda Paris.
“Wax isla barashada ayaa horumarisa kalsoonida ardayda inay raadiyaan xal, badanaa si hal abuur ah oo aqli badan.”
Ms Bir ayaa sheegtay in ardayda ka soo baxday 42 ay ku fiicnaan doonto la shaqaynta dadka, ka wadahadalka fikradahooda iyo difaacida – taasoo ah xirfad looga baahan yahay shaqada.
“Tani waa muhiim gaar ahaan dhinaca barnaamijyada kombuterka, taasoo dadka sameeya lagu yaqaano inaysan lahayn xirfad dad la dhaqmid,” ayay sheegtay.
Fikrada wax isla barashada ma aha wax cusub, jaamacado badan iyo iskuulo ayaa isticmaala, gaar ahaan maadooyinka la wada shaqeeyo sida injineernimada.
Sida la sheegay falsafad yaqaanka, Aristotle, ayaa lahaan jiray arday hogaamiyayaal ah, oo ka caawiya waxbarida ardaydiisa.
Laakiin daraasad la sameeyay dhawaan ayaa sheegtay in wax isla barashada ay ka caawinayso ardayda inay fahmaan maadada.
Professor Phil Race oo ku xeel dheer waxbarashada ayaa sheegay in maadooyinka ay fududaanayaan markii ay micneeyaan qof dhawaan bartay.
Professor Dan Butin, oo ka tirsan Merrimack College ee Massachusetts, ayaa u malaynaya in jaamacada 42 ay aad u fogaatay markii ay macalimiintii oo dhan ay meesha ka saartay. Daraasadiisa waxay muujinaysaa in wax isla barashada ay fiican tahay markii macallin uu kormeerayo.
“Sababta ugu wayn ee macallin loogu baahan yahay waxay tahay inuu ardayda ku hogaamiyo sidii ay uga gudbi lahaayeen waxyaabaha dhibka badan, macnaha badan, aadkana u adag oo awoodooda ka baxsan.” ayuu dhahay.
“Macallimiinta fiican waxay awoodaan inay ardayda u horseedaan inay wax fahmaan.
Prof Butin, ayaa sheegay “macnaha guud ee jaamacada inay tahay in laga shaqaysiiyo waxyaabihii ay ardayda horay u yaqaaneen iyo sida ay u arkaan adduunka.”
Habka jaamacada 42 ayaa ka duwan habka Moocs, oo ah waxbarasho internetka laga barto, taasoo u suurto galisay in arday badan ay internetka ka bartaan maadooyin si raqiis ah.
Sida Moocs, waxay bixisaa waxbarasho badan oo ardayda ay awoodaan oo ka duwan jaamacadaha caadiga. Laakiin waxay kaloo siisaa faa’iido bulsho oo ay dadkii ay dhismo isugu imanayaan iyo inay is dhexgalaan maalin walba.
Furitaanka jaamacada 42 ayaa timid markii ay bateen akadeemiyayaal lagu dhigo barnaamijka kombuterka ee dalka Maraykanka, oo bixiya koorsooyin gaaban oo ay qaataan kumanyaal arday oo doonaya inay ka faa’idaystaan baahida korortay ee loo qabo arday xirfadaha barnaamijyada kombutarada leh.
Previous PostMidaynta Manhajka Waxbarasho Ee Dugsiyada Somaliland Waa Tallaabo In La Bogaadiyo Mudan- Qalinka: Cabdiraxmaan Cadami Next PostKulan Lagaga Hadlayay Islaam Nacaybka Oo Lagu Qabtay Gobolka Soomaalidu Ku Badan Tahay Ee Minnesota Dalka Mareykanka